सिर्जना, कला र विचारको त्रिवेणी: 2009
Posted by Narthunge at 4:55 AM No comments:
भक्तबहादुर भर्सेस सरूभक्त
म जुनबेलादेखि सरूभक्त भएँ, त्यहीँदेखि विवाहको प्रश्न अन्त्य भयो । अब त्यो वैवाहिक जीवनको यात्रा मैले छोडिसकेको छु । विवाह गर्ने, घरगृहस्थी चलाउनेहरुको मानसिकता अलि बेग्लै प्रकारको हुन्छ । मैले त्यसप्रकारको मानसिकता त्यागिसकेँ ।
पोखरा बागबजारका भक्तबहादुर श्रेष्ठलाई आजभोलि बागबजारमै पनि 'भक्तबहादुर' नामले बोलाइन्न । ०३५/३६ सालतिर भक्तबहादुर 'सरूभक्त' भएका थिए । उनी आफैले आफ्नो नाममा हेरफेर गरेपछि अरूले पुरानै नाममा बोलाउने कुरै भएन । बजारमा भन्नेहरू त भन्छन्, प्रेममा असफल भएपछि भक्तले नाम नै सरूभक्त राख्यो । तर, सरूभक्त यसबारे प्रस्ट बोल्न अन्कनाउँछन् । 'म मेरो नामको कुनै व्याख्या-विश्लेषण गर्न चाहन्नँ,' लामो कपाल हल्लाउँदै सरूभक्तले भने, 'हुनलाई म सरूकै भक्त हुँ ।
यो नाम नै मेरो आत्मकथा हो । त्यसभन्दा बढी म केही भन्न चाहन्नँ ।'
लौ, फसाद ! सरूभक्तको प्रेमकथा उधिन्ने उद्देश्यले भेट्न खोजिएको हो । तर, उनी उत्साही देखिएनन् । 'त्यसभन्दा बढी' केही कुरै नगर्ने भएपछि उनको प्रेमकहानी कसरी जान्न सकिन्छ ? सरूभक्तको 'त्यसभन्दा बढी' सोध्न अरू कोसँग जानु ? हे साहित्यकारज्यू ! तपाईंको व्यक्तिगत जीवनबारे जान्ने हक तपाईंका पाठकलाई छ कि छैन ? 'यस्तो' साहित्य लेख्ने मान्छेको जीवन 'कस्तो' होला भनेर पाठक त जान्न चाहन्छन् नि ? प्रेमका मामिलामा सरूभक्त मख्ख परेर बस्दारहेछन्, केही प्रस्ट पार्नै नचाहने । लुकाएको वस्तुमै सबैको ध्यान जान्छ भन्ने थाहा पाएर नै उनले आफ्नो प्रेमकहानी छोपिराख्न खोजेका पो हुन् कि ? कतिन्जेल लुकाउने ? किन लुकाउने ? नामभित्र केही छ भन्ने भ्रम दिएर पाठकलाई लोभ्याइराखेका पो हुन् कि ?
आजको सरूभक्त त्यही बालक भक्तबहादुर हो, जसले पोखराको पहिलो निजी विद्यालयमा पढ्ने अवसर पाएको थियो । सरूभक्त त्यही विद्यार्थी हो, जो डाक्टर हुने लक्ष्य बोकेर विज्ञान पढ्न राजधानीको अस्कल क्याम्पस आएको थियो । र, बीचैमा छोडेर पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखरामा मानविकीमा भर्ना हुन गएको थियो । ऊ त्यही व्यक्ति हो, जसले इतिहास, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, समाजशास्त्रलगायतका विषयमा एमए गर्न भर्ना गर्‍यो र बीचैमा छोड्यो । अहिलेको सरूभक्त त्यही मान्छे हो, जसले बच्चामा 'भविष्यमा लेखक बन्छु' भन्ने कुनै सपना नै पालेको थिएन । तर, अहिले त्यही केटो कहलिएको साहित्यकार बनेको छ । भन्नेहरू त भन्छन्, 'सरू'सित बिछोडिएपछि नै भक्त साहित्यकार बन्यो । यदि भनिएको कुरो सत्य हो भने नाम चलेको साहित्यकार बन्नका लागि भक्तको जीवनमा उनकी प्रेमिका 'सरू' वरदान नै भइछिन् । यसरी नै बिस्तार-बिस्तारै सरूभक्त आफू हिँडेको बाटो मोड्दै र छोड्दै अघि बढे । जीवनका केही सत्य लुकाए पनि 'बाटो मोड्दै र छोड्दै' आएको सत्य भने उनी नअन्कनाईकन स्विकार्छन् । स्वस्थानीकथामा भनिनेजस्तो 'अनेक तरह'ले उनको जीवनको उकालो-ओरालो लम्बिइरह्यो ।
नाम सरूभक्त बनाएपछि उनी अलि 'वैरागी'जस्ता देखिए । प्रेमका मामिलामा 'बैरागिएका' यी साहित्यकारको सिर्जनात्मक जीवनचाहिँ त्यसै समयदेखि 'फलिफाप' हुँदै आएको छ । डाक्टर हुने सपना, पढ्दै गरेको विज्ञान, विश्वविद्यालयका सबै जाँच र सायद प्रेमिका पनि छुटेपछि उनी घुँडा धसेर लेख्न बसे । उपन्यास, नाटक, कथा, कविता, गीत, मुक्तक, निबन्ध, खण्डकाव्य— सबैसबै साहित्यिक विधामा उनले आयोजित रूपमा हात हाले । अहिले त उनी झ्याउरे छन्दमा महाकाव्यसमेत लेख्दै छन् । अनेक विधामा सरूभक्तले हात मात्रै हालेनन्, कतिपय विधालाई चपक्कै समाते । र, आफ्नो मौलिक पकड बनाए । ०४८ सालको मदन पुरस्कार उनकै चर्चित उपन्यास 'पागलबस्ती'ले पायो । अरू सम्मान र पुरस्कारका दोसल्ला पनि उनले धेरै नै ओढेका छन् । सरूभक्तका नाममा दर्जनौँ पुस्तक बजारमा छन्, थुप्रै छापिनै बाँकी छन् । उनको लेखन-गति तीव्र भएका कारण प्रकाशन र बजार प्रवर्द्धन अव्यवस्थित भयो भनेर पोखराका उनका साथीहरूले 'साहित्यकार सरूभक्त सरोकार केन्द्र' खोलिदिएका छन् । एक दशकदेखि उनी गाउँगाउँ जाने र कविता सुनाउने संरक्षण कविता आन्दोलन पनि चलाइरहेका छन् ।
पोखरा फर्केर मानविकीमा स्नातक गरेपछि सरूभक्त फेरि स्नातकोत्तर गर्न त्रिवि, कीर्तिपुर आए । तर, उनले कुनै पनि विषयमा पढाइ पूरा गरेनन् । 'पढ्छु भनेर धेरै विषयमा भर्ना त भएँ,' उनले ०३९/४० सालतिरको आफ्नो मनस्थिति सम्भ"mदै भने, 'तर, कसोकसो भएर जाँचै दिइनँ । म त्यसपछि फेरि पोखरा गएर गुप्तवास बसेँ ।' विज्ञान पढ्दापढ्दै छोड्नु, धेरै विषयमा भर्ना भएर कुनै विषयको पनि जाँच नदिनु, पोखरा गएर गुप्तवास बस्नु, डाक्टर हुने सपना त्यागेर साहित्य-लेखनतिर लाग्नु, यस उमेरसम्म पनि विवाह नगरी बस्नु, धर्मसन्तानमा छोरी नै राख्नु, त्यो पनि सरू न्ाामकै- यी सबै घटनाको पर्दाभित्रको कारक वा रहस्य के छ ? 'त्यस्तै भयो,' सरूभक्त सुस्तरी फुस्फुसाए । 'व्यक्तिगत भावनात्मक कारणले जाँच दिने गाम्भीर्य मैले गुमाएँ,' उनले भने, 'पढ्दै गएँ, छोड्दै गएँ । त्यतिबेला म दिग्भ्रमितजस्तो पनि भएँ । र, त्यसपछि म घरतिरै फर्कें ।' बडो जोगिँदै-जोगिँदै र अड्किँदै-अड्किँदै उनले पुराना दिनका 'खासखास' घटना लुकाए । 'व्यक्तिगत भावनात्मक' कारणलाई लुकाउन सरूभक्तलाई त्यति सहज भइरहेको थिएन । 'पोखरा पुगेपछि म गुप्तवासजस्तो बसेँ,' उनले भने, 'अनि लेखनतिर अलि बढी नै लाग्न थालेँ । म यसरी, कसरी हो कसरी आफूले सोच्दै नसोचेको क्षेत्रमा लागेँ ।' गुप्तवासमै बसाउने 'व्यक्तिगत भावनात्मक' कारण के थियो ? सरूभक्त यस विषयमा मौन मात्रै बसेनन्, बरु 'व्यक्तिगत जीवनलाई सार्वजनिक चर्चा नगरौँ' भन्ने आग्रह पनि थपे । 'अरू साथीहरू आप\_mनो व्यक्तिगत जीवनका सम्बन्ध बढाइ-चढाइ गर्दा रमाउँछन्,' सरूभक्तले आफ्नो बचाउ गर्दा अरू साथीहरूको पनि सहयोग लिए, 'म उनीहरूजस्तो झुटो कहानी बनाउन चाहन्नँ । मेरा आफ्नै विश्वास, धारणा र आस्थाहरू छन् ।' यति भनिसकेर उनले फेरि दोहोर्‍याए, 'आफ्ना नितान्त व्यक्तिगत कुरा सार्वजनिक गर्न चाहन्नँ । म मेरै विश्वासले सरूभक्त भएको हुँ, मेरो जीवन पूजा र आराधनाको जीवन हो ।' अबचाहिँ सरूभक्त अलि बढी भावुक देखिए साथै अलि बढी गम्भीर पनि ।
'व्यक्तिगत' घटनालाई सार्वजनिक गर्न नरुचाए पनि त्यही घटनाले सरूभक्तलाई साहित्कारका रूपमा स्थापित गरायो । उनले यो पनि स्विकारे, प्रेमिकाका कठोर प्रहारले पनि कोही मान्छे लेखक बन्न सक्छ । 'कुनै प्रहार यस्ता पनि हुन्छन्, जसले राम्रो लेखकलाई ध्वस्त पार्न पनि सक्छ,' उनले भने, 'विश्वमा एकजना सफल हुने र जित्नेको इतिहास लेखिन्छ, हार्ने हजारौँको कथै हुँदैन ।' उनले आफ्नै जीवनमा पनि 'व्यक्तिगत भावनात्मक' घटनाको असर रहेको स्विकारे । र थपे, 'अरूअरू कुराले पनि मलाई प्रेरित गरेको हो । पोखराका जात्राहरूमा बजारबजार नाच्दै हिँड्ने मेरा पिता, विद्यालयका गुरु र युवाकालका सुखदुःखात्मक घटनाका प्रभावले लेखनमा म
प्रवृत्त भएँ ।'
कसै-कसैले प्रश्न गर्छन्— विवाह पनि नगरीकन सरूभक्त कसरी बाँच्न सकेको होला ? न साथमा मायालु श्रीमती छिन्, न काखमा छुनुमुनु गर्ने छोराछोरी छन् ! पारिवारिक जीवनदेखि नै किन यति धेरै विरक्त साहित्यकारज्यू ? 'होइन, मेरो परिवार छ नि त,' ०५५ सालदेखि धर्मपुत्री राखिएकी छोरी सरस्वतीको नाम लिँदै सरूभक्तले आरोपको प्रतिरक्षा गरे, 'मैले छोरी पनि पाएको छु, यसपालि मैले नाति पनि पाएँ ।' विवाह नि विवाह ? उनले फेरि आफ्नो अहिलेको 'हालत'को पुष्टि गर्न केही थप व्याख्या गरे, 'मैले एउटा विश्वास र प्रेममा आफूले चाहेजस्तो जीवन बाँच्न चाहेको हुँ । जे बाँच्न चाहेको हुँ, त्यही बाँचिरहेको छु ।' त, सरूभक्तको जीवनमा विवाह भन्ने च्याप्टर खुल्दै नखुली बन्द भइसकेको हो ? भने, 'म जुनबेलादेखि सरूभक्त भएँ, त्यहीँदेखि विवाहको प्रश्न अन्त्य भयो । अब त्यो वैवाहिक जीवनको यात्रा मैले छोडिसकेको छु । विवाह गर्ने, घरगृहस्थी चलाउनेहरूको मानसिकता अलि बेग्लै प्रकारको हुन्छ । मैले त्यसप्रकारको मानसिकता त्यागिसकेँ ।' उनी अब फेरि कहिल्यै विवाह होला भन्ने पनि कल्पना गर्दैनन् । ०३५ सालमा सरूभक्त भएपछि उनले आफूलाई बलिदान र उत्सर्गको जीवन बाँच्ने दिशाको यात्रामा लागेको दाबी गरे । 'आन्दोलनमा लागेर गोली खानेलाई 'कस्तो मूर्ख रहेछ, खुरुक्क नबाँचेर गोली खान्छ ?' भनेजस्तो मलाई 'कस्तो मूर्ख रहेछ विवाहै नगर्ने ?' भन्नेहरू हुन सक्छन्,' उनले भने, 'तर, यो मेरो जीवन पनि आस्थाका कारण बाँचेको त्यागको जीवन हो । म कुन भावना र मर्मले यस्तो उत्सर्गको जीवन बाँचेको भन्ने थाहा नपाउनेहरूले कुण्ठाको जीवन बाँचेको पनि भन्न सक्छन् ।'
सरूभक्तले भन्दै गए, 'म प्रेममा विश्वास गर्छु, यो दुनियाँ गर्दैन । भावना र संवेदना जति महान् हुन्छ, प्रेम त्यति नै महान् हुन्छ ।' आफूलाई अहंवादी लेखक बताउने सरूभक्तले अन्त्यमा आफ्नै उपन्यास 'पागलबस्ती' अनुकूलको प्रेमको परिभाषा पनि गरे, 'प्रेम मानवीय अहंको सर्वश्रेष्ठ रूप हो, पवित्र रूप हो ।'
तर, दुनियाँले जान्न चाहेको एउटै कुरा उनले निरन्तर लुकाइराखे— उनकी प्रेमिका को थिइन् ? प्रेम किन असफल भएको थियो ? र, उनले त्यो प्रेमकथा कहिलेसम्म लुकाइराख्ने हुन् ?
Posted by Narthunge at 4:54 AM No comments:
Posted by Narthunge at 5:24 AM No comments:
विसं. १९८४ मा काठमाडौंको असनमा जन्मे पनि बासितै बर्मा पुगेर बालादिनमै विश्वयुद्धका बीभत्स दृश्यहरू झेलेकी साहना प्रधान नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनकी एक अथक योद्धा हुन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलालकी जीवनसंगिनी प्रधान अहिले नेकपा (एमाले) की स्थायी समिति सदस्य छिन् । प्रधानका अनेक उकाली-ओरालीसहितको बाल्यदिनको स्मृति उनकै शब्दमा :
मेरा बुबा परिवार पाल्ने जोहो गर्न १९८५ सालतिर बर्मा लाग्नुभयो । उहाँ बर्मामा नेपालकै पोते, चुरा, हुक्का, थाङ्काहरूको व्यापार गर्नुहुन्थ्यो । बुबा उता जाँदा यता आमा गर्भवती र हजुरआमा विधवा हुनुहुन्थ्यो । भाइ जन्मेको थिएन । भाइ जन्मेपछि सुत्केरी अवस्थामा खानपानको अभावका कारण आमालाई टिबी रोग लागेछ । ठूलीसासु र ठूलाससुराले काम धेरै लगाउने र खान कम दिने कारणले आमालाई टिबी भएको रहेछ । रोगले धेरै च्यापेपछि आमालाई पशुपति लगियो । त्यहाँ चार दिन राखियो । आमाले छोराछोरीलाई हेर्छु भन्नुभएछ र हामीलाई पनि पशुपति लगियो । आमाले मलाई सुम्सुम्याएर अन्तिमपटक म्वाइँ खाएको अहिले पनि ससम्झिन्छु । आमा १९८८ असारमा बित्नुभयो । त्यसपछि बाबा बर्माबाट फर्किनुभयो र १९८९ मा हजुरआमा, काकाकाकी गरी हामी आठजनालाई लिएर बर्मा जानुभयो । त्यसवेला म पाँच वर्षकी थिएँ ।
सन् १९३९ तिर दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो । विश्वयुद्धको सुरुमा अमेरिकाको पर्ल हार्वरमा जापानले पहिलो हमला गरेको कुरा बुबा-काकाहरूले अखबारमा पढेको सम्झन्छु । विश्वयुद्धको खतरा बर्मामा पनि पर्न सक्छ भनी अनेक अनुमानहरू हुन थाले । कारण बर्मा पनि बि्रटेनको आधिपत्य भएको देश थियो । त्यसैले सबै जापानले बर्मामा आँखा गाड्छ भन्थे । बर्मा र हामी बसेको ठाउँ मेस्योमा पनि बम खसाउँछ भन्ने गाँइगुइँ सुरु भयो । सबैले सुरक्षाका लागि घरपछाडि टे्रन्च (खाडल खनेर मानिस उभिन मिल्ने ठाउँ) बनाउनुपर्छ भन्न थाले । मान्छेहरूले परिवारअनुसारका खाडल खन्न थाले । ट्रेन्चमा बस्नुपर्छ भन्ने उर्दी पनि आयो । सबैले बनाएजस्तै हामीले पनि छातीले नछोई भुइँमा टुक्रुक्क बस्नेगरी टे्रन्च बनायौँ । बम पड्कँदा कानको जाली नफुटोस् भनेर कानभित्र रुई हालेर बस्थ्यौँ । हवाईजहाज आउँदा सबै रुन थाल्थे, कोलाहल हुन्थ्यो । हामी दस/बाह्रपटक टे्रन्चमा पस्यौँ । हवाईजहाज आउँथ्यो, बम खसाल्थ्यो र जान्थ्यो । 'लौ है हवाईजहाज आयो' भनी सुसूचित गर्न आकाश कराउनासाथ साइरन बज्थ्यो । फेरि गएपछि 'लौ है हवाईजहाज गयो, खतरा टर्‍यो' भनी साइरन बज्थ्यो । साइरन बज्नासाथ टे्रन्चभित्र पस्ने र निस्कने काम हुन थाल्यो । हामीलाई केटाकेटीलाई टे्रन्चभित्र पस्दा, निस्कँदा रमाइलो लाग्थ्यो ।
संसारभरिका देशमा बि्रटेनको उपनिवेश कायम भइसकेको थियो । मलाई युद्धका अरू कुरा थाहा थिएन । धेरै देश आफ्नो कब्जामा राख्ने बेलायतमा कहिल्यै सूर्य अस्ताउँदैन भन्ने थाहा थियो । बेलायतको उपनिवेश भएको देशमा अमेरिका, जापान र अरूको आँखा गडेको र तिनीहरू उपनिवेशलाई आफ्नो बनाउन चाहन्छन् भन्ने बालसुलभ दिमागले केही बुझेकी थिएँ ।
सन् १९४२ । एक शनिबारको दिन । अफिसहरू बिदा थिए । म र भाइ सधैं दूध लिन जाने ठाउँमा बाल्टिन झ्याँइकुटी पार्दै गयौँ । त्यहीवेला साइरन बज्यो र भागदौड सुरु भयो । हामीलाई भाग्न आएन । हामी त रुन पो थालेछौँ । हाम्रो घर नजिकै थियो तर, हामीलाई जाने होसै आएन । हामी एउटा रुखमुनि रुँदै बसेको थियौँ । घरका परिवार सबै टे्रन्चमुनि बस्न तम्तयार भएछन् । तर, हामी दुईजना नभएकाले काका र दाइ हामीलाई खोज्न आए । उनीहरूले हामीलाई तानेर घरमा ल्याए र टे्रन्चभित्र लगे । हामी टे्रन्चभित्र पनि रोइरहेका थियौैँ । डाङडाङ र डुङडुङ साथ ठूलो बमबाड भयो । मेस्योमा भएको त्यो पहिलो बमबाड थियो । त्यो सम्झँदा अहिले पनि मन थर्थर काँप्छ । त्यहाँ दुई सयभन्दा बढी हवाईजहाज आएका थिए बम खसाल्न । ती हवाईजहाज लाइन लाएर बुट्टैजस्तो भएर आउँथे । हामी भाग्दाभाग्दै पनि फर्कीफर्की हेथ्र्यौं । एकै लाइनमा पाँच हवाईजहाज तल आउँछन्, बम खसाल्छन् र फेरि माथि जान्छन् । अर्को लाइनमा फेरि अरू नै हवाईजहाज माथि जान्छन् । ठूलो आवाजसहित बम बिस्फोट भयो । विनाश भयो र एक घन्टापछि फेरि साइरन बज्यो । हामी डराईडराई बाहिर निस्कियौँ । बाहिर निस्केपछि थाहा भयो- त्यो बमबाडमा हामी पढ्ने स्कुल ध्वस्त भएछ । अस्पताल र महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू पनि ध्वस्त भएछन् । अब हामी स्कुल जानुपरेन । सायद त्यो दिन शनिबार नभएको भए हामी पनि त्यो बमबाडमा पर्ने थियौँ ।
बर्मा युद्धभूमिमा परिणत भयो । दैनिक तीन/चारपटक साइरन बज्न थाल्यो । हवाईजहाज आउँछ, जान्छ । मान्छेको टाउकोमाथि जुनैवेला पनि बम खस्ला भन्ने त्रास थियो । त्रासको पहाड बोकेर मान्छेहरू साह्रै त्रसित जीवन बाँच्थे । हवाईजहाज आउने, जाने भएकाले हाम्रो घरपरिवार र छिमेकीहरू १०/१२ परिवार अलि टाढाको पैलुङ भन्ने ठाउँमा गयौँ । त्यहाँ नेपालीहरूको बस्ती थियो । त्यहाँ चटाईको बोरा र फुसको छाना बनाएर एउटा मेस सञ्चालन गरिबस्ने व्यवस्था गरियो । सधैं बिहान उठेर खाना खाएर बुबा, काका र दाइ दुकान चलाउन सहर जानुहुन्थ्यो । स्वास्नी मानिस र केटाकेटी गाउँमा बस्थे । यसरी महिना दिन बित्यो । गाउँमा स्ट्रबेरी खुब पाइन्थ्यो । मलाई पनि मज्जा लाग्यो । पढ्नु थिएन । अरू केही काम थिएन । हामी स्ट्रबेरी खुब खान्थ्यौँ ।
एक दिन हामी साथीहरू नजिकको खोलामा लुगा धुन गएका थियौँ । लुगा धोएर फर्किरहेका वेला हाम्रो टहरामा दनदन आगो बलिरहेको देख्यौँ । हाम्रो लुगाफाटो सबै त्यही आगोमा डढेर सिद्धिए । काकी, बजै सबै बाहिर थिए । हाम्रो टहरामा डकैती भएको रहेछ । त्यो रात हामी खुला आकाशमुनि सुत्यौँ ।
भोलिपल्ट हामी त्यो गाउँ छोडेर सहर पस्यौँ । ५/६ दिन सहरमा डराईडराई बसियो । हवाईजहाज आइरहन्थ्यो । साइरन पनि वेलावेला बज्थ्यो । त्यस्तो बमबाड गाउँमा थिएन, सहरमा मात्र हुन्थ्यो । फेरि २०/२५ परिवार टाढै जाने भनेर समसाई बस्तीमा गयौँ । त्यहाँ नेपाली ज्ञवालीहरू बस्दथे । सबै एउटा कम्युन घरमा बस्ने सल्लाह भयो । त्यहाँ डेढ सय मानिस बस्न सकिने काठको ठूलो घरको व्यवस्था मिलाएर ४/५ वटा परिवारको मेस बनाएर बस्यौँ । नजिकै खोलाको माथिबाट रेलको लिक गएको थियो । लिकको मुन्तिर रेल नआएसम्म हामी पौडी खेल्थ्यौँ र दाउरा लिएर घर फर्किन्थ्यौँ । यसरी दुई महिनासम्म गाउँमा आनन्दले बस्यौँ ।
एक दिन अचानक ठूलो चट्याङ परेजस्तो आवाज आयो । हामीलाई त्यो गाउँ नै उड्योजस्तो लाग्यो । एकछिन् त गाउँभरि ग्रहण लागेजस्तो, धुलो उडेर अन्धकार भयो । धुलो र अन्धकार हटेपछि परको सहरमा आगोका मुस्लाहरू देखापरे । सहर खत्तम भयो भन्ने लाग्यो । हाम्रो परिवारका कोही सहरमा थिए । त्यो दिन बेलुका घरमा खाना पाकेन । अचम्म हामीलाई भोक पनि लागेन । त्यस रात हामी सबै मायाले डल्लो परेर सुत्यौँ । अब बर्मामा बस्ने स्थिति भएन भनेर ठूलाबडाले कुरा गर्न थाले । नेपाल जानुपर्छ भन्ने चर्चार् चल्न थाल्यो । त्यतिवेलासम्म हामी भुरालाई हाम्रो देश नै बर्मा हो भन्ने लागेको थियो ।
हामी नेपाल जाने टुंगो भयो । हाम्रा सामानहरूमध्ये आफूलाई अति आवश्यक मात्र बोकेर हामी हिँडेका थियौँ । दस हिस्सामा नौ हिस्सा सम्पत्ति सहरमा र छोडेका थियौँ । एक हिस्सा मात्र हामीसँग थियो । त्यहाँ होटल र पसलमा काम गर्ने तीनजनालाई 'कमाएजति तिमीहरू नै राख' भनेर हामी हिँड्यौँ ।
हामीहरू रेल पर्खेर बस्यौँ । रेल दिनको दुई/तीनचोटि ओहोरदोहोर हुन्थ्यो । पछि थाहा भयो ती रेल लिग तोडिएकाले बीचमै पल्टिएछन् । हामी समसाई स्टेसनमा थियौँ । किंकर्तव्यविमूढ भएका थियौँ हामी । राति १२ बजे एउटा गाडी आइपुग्यो । हामी त्यसमा चढ्यौँ । बिहान ६/७ बजे मात्र सहरमा आइपुग्यौँ । अब हामी माण्डले हिँड्नु थियो । रेलबाट राति १० बजे माण्डलेको अमरापुरी भन्ने बन्दरगाह पुग्यौँ । चारैतिर अँध्यारो थियो । स्यालहरू कराइरहेका थिए । हामी कहाँ हिँडिरहेका थियौँ, थाहा थिएन । हामी नौजनाको परिवार सबै एकै ठाउँमा उसको टाउको उसको जीउमा, उसको टाउको अर्कोको जीउमा खप्टेर गुडुल्को परेर सुत्यौँ । बिहानीको झिसमिसे उज्यालो भयो ।
त्यहाँ हामीले अनौठो दृश्य देख्यौँ । एक दिनअगाडि त्यहाँ ठूलो बमबाड भएको रहेछ । वरिपरि हजारौं मान्छेका लास थिए । कसैको टाउको छैन । कसैको हात छैन । कसैको खुट्टा छैन । कसैको आधा जीउ नै छैन । कोलाहल थियो । कोही ऐयाऐया भन्दै चिच्याइरहेका थिए । तिनीहरूका नजिक हामी थियौँ । कति त पानी मागिरहेका थिए । कति जीवनको अन्तिम सास फेर्दै थिए । त्यस्तो बीभत्स दृश्य हामीले देख्यौँ, जुन म अहिले पनि बिर्सन सक्दिनँ ।
हामी जहाजमा जाने सुर थियौँ । जहाजमा रोल कल गरिँदै थियो, हामी सबैको नाम बोलाइयो । परिवार सबै जहाजभित्र पस्यौँ । तीन तलाको थियो जहाज । हामी दोस्रो तलामा बसेका थियौँ । जहाजभित्र हजारौं यात्रु अट्थे । त्यहाँ कोठाहरू थिएन । जहाँ पायो त्यहीँ थुप्रो भएर बसेका थियौँ । त्यही वेला थुप्रै हवाईजहाज आए । पानीजहाजमा मान्छेहरू चढिसकेका थिएनन् । ३/४ सयजति हवाईजहाज आएर ढर्रर बम खसाले । पानीजहाजमा त हानेनन्, तर बाहिर हजारौं मान्छे बसेका थिए । अधिकांश परिवारका सदस्यहरू आधा बाहिर, आधा जहाजभित्र थिए । बम हानेपछि आगो बल्यो । कसैको लोग्ने, कसैको स्वास्नी बाहिर थिए । जहाजका मान्छे आत्तिएर बाहिर जान खोज्थे । कोही त्यो इरावती नदीमै हाम्फाल्न खोज्थे । जहाजको माथि इन्जिन तताउन आगो बलेको थियो । कयौंले कता जाऊँ, कता जाऊँ भएर पानीमा हाम्फाले । घन्टाभर कोलाहल भयो । भागदौड मच्चियो । पछि शान्त भयो । जहाज चढ्न बाहिर तयार भएर बसेका हजारौं मान्छे एकै चिहान भए । जमिन दनदनी बल्न थाल्यो । बाहिर एउटा सन्नाटा छाएको थियो । लासहरू मात्र देखिन्थे जता हेरे पनि । हामीले सुन्यौँ कि नजिकै 'आर्सेनल' (हातहतियार भण्डार) थियो र त्यही भण्डार ध्वस्त हुँदा आगोको लप्का निस्किएर जमिन जलेको थियो । बाहिरका मान्छेहरू सबै जलेका थिए । ती मान्छेहरू जलेको वेला खसीबोका पोल्दा जसरी बटारिन्छ, त्यसैगरी बटारिएका थिए । बाँचेका मान्छेले मरेका र घाइते भएकालाई भकाभक पानीमा फाल्न थाले । पछि थाहा भयो बमबारी हुँदा जहाजको माथ्लो छत पनि प्वाल परेछ र क्याप्टेन पनि मरेछन् ।
दिउँसो एउटा सानो जहाज आयो । त्यसको क्याप्टेनले हामी बसेको जहाज चलायो । एक घन्टापछि त्यो जहाज सानो बुट्यान भएको ठाउँमा रोकियो । हामी तंगि्रन बाहिर निस्कियौं । हामीसँग खानेकुरा थिएन । त्यस रात भोकै सुत्यौँ । बिहान मात्र जहाज चल्यो ।
सातौं दिन हामी भामो
(उत्तर बर्मा) भन्ने ठाउँ आइपुग्यौँ । हामीले जे पाइन्छ, त्यो खाएर बाँचेका थियौँ । भामो पुगेपछि हामी जहाजबाट ओर्लियौँ । दन्तेकथाहरूमा भएजस्तै यो सहरमा मान्छे थिएनन् । साह्रै सुनसान थियो सहर । जताततै मान्छेका लास मात्र थिए । बजार अस्तव्यस्त थियो । हामी फेरि जहाज चढ्यौँ र कत्था भन्ने सहरमा पुग्यौँ । त्यो सहर पनि भामोजस्तै रहेछ । त्यो सहरभरि पनि एकजना मान्छे थिएन । मान्छेहरू मरिरहेका थिए र रेल पल्टिरहेको थियो । पानीजहाज कत्थाभन्दा अघि जाँदैनथ्यो । हामीसँग भएको सामानको भारी बोकेर हिँड्ने आँट थिएन । त्यसैले हामीले बोकेका धेरैजसो सामान त्यहीँ फालेर हिँड्यौँ ।
मैले जीउमा पाँचवटा प
mक लगाएँ, एकमाथि अर्को खप्टिएर । हामी त्यहाँबाट हिँडेको तीन घन्टापछि गाउँ आइपुग्यो । त्यहाँ पुगेपछि जे भेटिन्छ त्यो ल्याएर सामूहिक भान्सा गर्‍यौँ । ५/६ दिनपछि हवाईजहाज आयो । त्यो बि्रटिसको हवाईजहाज रहेछ । हामीजस्ता धेरैलाई राहत बाँडेर गयो । कुनै जहाज आएर सामान खसाल्न थाल्यो भने मेरो जीउमुनि भएको सबै सामान आफ्नो भन्दै म घोप्टिन्थेँ र अधिकार जमाउँथेँ । कति हिँडियो, भनिसाध्ये छैन । त्यस्तै महिना दिन हिँडेपछि मेरो पाँचमा दुईवटा पmक फाटिसकेका थिए । जंगलका काँडाले कोतरेका ती फ्रक गाँठो पारेर पनि लगाउनै नहुने भएपछि फालिदिन्थेँ ।
बा, हामीलाई बाटोमा भएको पानी नखानु है भनेर सम्झाउँथे । पानीमा मयलत मचष्लप, उयष्कयल गकभम ष्ल धबतभच लेखिएको हुन्थ्यो । त्यस्तो लेखेको ठाउँमा २/४ जना मरिरहेको पनि भेटिन्थ्यो । एउटा गाउँमा पुग्दा ठूला किसानको घर रहेछ । भकारीमा धान राखेको भेटियो । हामीसँग बन्दुक बोकेका मासिन पनि भएकाले डरले गाउँ चकमन्न बनाएर गाउँलेहरू कतै लुक्न गएका रहेछन् । लुक्न जाँदा घरमा ताला लगाउन पनि भ्याएनन् । गाउँमा धेरै धान देखेपछि हामीले त्यो कुटेर चिउरा र चामल बनायौँ । त्यहाँ बेलुका भात पकाएर मज्जासँग खायौँ ।
बेलुका गाउँमा डकैती भयो । मान्छेहरू काटिए भन्ने सुनियो । हामी सबै भाग्नुपर्ने भयो । त्यहाँबाट राति जंगलै जंगल हामी भाग्यौँ । अन्त्यमा हामी डाकबंगला आइपुग्यौँ । यसरी बाटामा अनेक समस्याहरू आए । अनकन्टार जंगल, बाटै नभएका ठाउँहरू हिँडियो । काँडाले जीउ त कति कोतर्‍यो थाहा छैन । हामीले घुँडाभन्दा मुनि पानीमा र आधा जीउ जमिनमा गरेर पनि रात बितायौँ ।
अनकन्टार जंगल, पानी भरिएको नदी गरेर पाँच दिनसम्म हिँड्यौँ । कहिले त दुई/तीन दिनसम्म पनि केही खान पाएनौँ । गर्मीले गर्दा आँप खाइए बिरामी परिन्थ्यो । आँप देखेर पनि त्यसै हिँड्नुपर्थ्यो । भोक सहन नसकेर आँप खाँदा धेरै मान्छे मरेका थिए । उनीहरूका लास जंगलैभरि देखिन्थ्यो ।
बर्मामा एउटा पञ्जावीको भर्खरै विवाह भएको थियो । युद्धले गर्दा त्यो पञ्जावी पनि श्रीमती लिएर बाटो लाग्यो । श्रीमती बाटोमा हिँड्न सकिन र श्रीमान्ले पनि त्यसै छोडेर जाने आँट गरेन । उसले आफ्नी श्रीमतीलाई रूखको आडमा राखेर आराम गर्दै थियो । हामी त बाटो लाग्यौँ । मलाई लाग्छ, त्यो अशक्त श्रीमती च्यापेर बस्दाबस्दै उनीहरू दुवै मरे होलान् ।
यसरी हामी नागा पर्वतमा पुग्यौँ । नागा पर्वत आइपुग्नै लाग्दा बाटामा हामीले पैसा जलाएको देख्यौँ । युद्धको वेला पैसाको अर्थ हुँदो रहेनछ । नागा पर्वतमा बाख्रा चरिरहेका देखिन्थे । भोकाहरूले बाख्रा मारेर खाए । मनिपुर पुग्न दुई दिन मात्र बाँकी थियो । बाटो एकदमै साँघुरो थियो । त्यही साँघुरो बाटोमा पहिल्यै मरेको लासहरू भेटिन्थे । हामी कुहिएका लासमाथि टेकेर अघि बढ्थ्यौँ । कहिलेकाहीँ त्यो कुहिएको लासमाथि ग्वाम्म खुट्टा गाडिन्थ्यो ।
हामी बर्माको युद्धबाट भागेर टाढा आइपुगेका थियौँ । पानीमा हिँड्दा कतिपटक गोहीबाट पनि बच्नुपथ्र्यो । हामीले बाटोमा मागेर खायौँ । हामीले भोको पेट र निरीह अनुहार देखाउँथ्यौ । मनिपुर पुग्न दुई दिनको बाटो भए पनि हामी नागा पर्वतमा एक साता जति हिँड्यौँ होला, पानीमा पाँच दिन हिँड्यौँ । कति मान्छेलाई पानीमा गोहीले पनि तान्थ्यो ।
अब हामी मनिपुर पुगेका थियौँ । हामीलाई हिन्दुस्थान आइपुगेको खुसी थियो । मनिपुरेहरूले एक पैसाको एक गोल्टन बट्टा चिउरा बेचिरहेका थिए । हामीले पेटभरि सख्खर र चिउरा खायौँ । हामीलाई मारवाडीहरूले कम्बल र साडी बाँडे । हामी परिवार बाँडिएर लरीमा चढ्यौँ । हामी चढेको लरी इम्फाल गएर दुर्घटना भयो । त्यहाँ सातजना मरे । मेरा खुट्टा पूरै खेतमा गाडियो । परिवारका अन्य सदस्यलाई केही भएन । ३/४ घन्टा कुरेपछि अर्को गाडी आयो । हामी डिनापुर हस्पिटलमा १० दिन बस्यौँ ।
त्यसपछि हामी गुहाटी आइपुग्यौँ । गुहाटीबाट हामी रेलमा पार्वतीपुरसम्म आइपुग्यौँ । पार्वतीपुर अहिले बंगलादेशमा पर्छ । हामीसँग केही पनि थिएन । हामीले एउटा बाकस किन्यौँ । साडी र अरू लुगा पनि किन्यौँ । बुबाले मलाई एउटा फ्रक किनिदिनुभयो ।
हामी गाडीबाट वीरगन्ज आइपुग्यौँ । हामीले यति ठूलो यात्रा तय गरेर आफ्नो माटो टेकेका थियौँ । बाबा त रुनुभयो खुसीले । 'सवारी मेरो रेलैमा...' भन्ने गीत मैले वीरगन्जमा पहिलोपटक सुनेँ । हामी थानकोटबाट हिँडेरै काठमाडौंको हाम्रो घर असन आइपुग्यौँ । मैले त्यसैवेला पहिलोपटक काठमाडौं देखेँ । अनौठो लागेको थियो काठमाडौं । त्यसवेला म पन्ध्र वर्षकी थिएँ ।दीपक सापकोटाspkt.deepak@gmail.com
Posted by Narthunge at 3:56 AM No comments:
Posted by Narthunge at 3:45 AM No comments:
मान्छेलाई प्रेमले पनि मार्दोरहेछ
मृत्युको सिलुएट (पाश्र्वछाया) मा उभिएर जगदीश घिमिरेले निकैपटक आफ्नो जीवनको सिंहावलोकन गरेका छन् । सन्ध्यामा अथवा जुनेली रातमा धेरै टाढा डाँडामाथि देखिने वृक्षका आकार, पर्वतका आकार, कुनै वस्तु वा व्यक्तिका आकारजस्तो केही अमूर्त वस्तु देखेका छन् । त्यो अस्पष्ट र भयप्रद भएर उनीअघि निकैपटक उभिएको छ । अस्पतालले भनेदेखिन् नै प्रत्येकपटक आफ्ना जीवनका दिनहरू सकिन लागेको जगदीश घिमिरेले देखेका छन् । उनले त्यो विराट् 'ब्ल्याकहोल' देखिसके । त्यसबाट हुने सम्भावित भय, सन्ताप, दुःखानुभूतिले उनलाई निमेष-निमेषमा छोइरहेको हुन्छ ।
टोल्स्टोयले 'बूढो खोल्सतोमेर' कथामा 'ईश्वरले मान्छेलाई तीनवटा रहस्यको ज्ञानबाट वञ्चित गरेको' बताएका छन् । ती के भने— मानिस जन्मेपछि कसरी सुरक्षित हुन्छ, उसको आयु कति लामो छ र मृत्युको घडी कसरी आउँछ । जगदीश घिमिरेलाई भेट्ने बेला मनमा लागेको थियो, सायद यी तीनै रहस्य खुल्ने भए सृष्टिको स्परूप नै भिन्न हुन्थ्यो । जवानीका जोसमा मान्छेले खोलाका ठूला जँघार पनि तर्छ, दुर्लंघ्य पहाड पनि नाघ्छ । भर्भराउँदो जवानीमा मृत्युबारे कसैले सोच्तैन । नत्र जीवनको मधुरतम रस पनि बाँकी रहने थिएन । त्यसबेला मान्छेलाई लाग्छ— यत्तिकैमा पुग्छ होला, मर्नेहरू मरिरहून्, म अमर छु । त्यसबेला शरीरको नश्वरता र क्षणभंगुरता पनि मान्छेले बिर्सेकै हुन्छ । जगदीश घिमिरेको जवानी सिद्धिएको धेरै भयो । यस बुढ्यौलीमा आएर उनले सुनाए— कसैको जीवनको टुंगो छैन, तर मेरो जीवनको टुंगो छ ।
जगदीश घिमिरेले अमेरिकाको ओक्लोहामा सहर पुगेपछि थाहा पाए— मलाईर् मल्टिपल माइलोमा क्यान्सर छ । त्यसै दिन उनको ढाड फ्रयाक्चर भयो र उनी हलचल गर्न नसक्ने गरी ढले । बाँकी जीवन ढलेरै बिताउनुपर्ने बाध्यताको त्यो पहिलो दिन थियो । 'हामी अमेरिका जाँदा जति उत्साही थियौँ, त्यहाँबाट फर्किंदा त्यसभन्दा हजारौं गुणा दुःखी थियौँ,' उनले सुनाए— 'म बाँचुन्जेल त्यो दिन बिर्सन सक्नेछैन ।' त्यसबेला डाक्टरले यिनको बाँच्ने आयु पनि तोकिदिए—'तीन-चार वर्ष । त्यसमा केही घटी-बढी हुनसक्छ ।' बढी भए त राम्रै भो । तर, घटी भयो भने ? उनी यही सोचेर तर्सिन्छन् ।
अब जगदीशका बालकझैँ नांगिने दिन पनि सुरु भए । नर्सहरूले ओछ्यानमै दिसा, पिसाब गराइदिन्थे, दिनको दुईपटक नुहाएर लुगा फेरिदिन्थे । खुवाउँथे । 'त्यही बेलादेखि म महिनौँसम्म अस्पताल र घरका सहायकका अगाडि निर्वस्त्र भएँ ।' मृत्यु पनि निर्वस्त्र भएर यिनको अगाडि आएको थियो । कुन बेला टपक्क टिपेर लैजान्छ के पत्तो ? रोगले मृत्युको निम्तो दिएको बेला यिनको मनमा के कुरा खेले हुन् ? 'त्यस रोगको पीडा म बताउन सक्तिनँ । एक दिन मर्नु त छँदै छ । यतिसारो पीडित भएर मरिजानु निको होइन,' उनले सुनाए, 'अन्ततः मृत्यु दुःखद होइन । रोएर बाँच्नुभन्दा रुवाएर जानु निको हो जस्तो लागेको थियो ।'
डाक्टरले बाँच्ने आयु तोकिदिए यता उनका सबै दिनरात अस्पतालको झ्यालखाना, कोठाको कठघरा र ओछ्यानको पिँजडामा बितिरहेका छन् । उनी अचानक जीवनको सबैभन्दा उज्यालो प्रकाशबाट एकाएक साह्रै अँध्यारो अन्धकारमा पुगे । त्यसबेला यिनलाई हेर्न भएजतिका आफन्त आउँथे, रुन्थे र स्तब्ध हुन्थे । आँखाबाट बरर्र.... आँसु खसाल्थे । थरीथरीका उपचार गर्न सल्लाह दिन्थे । 'उपचारका क्रममा म त्यो दन्त्यकथाको राजकुमारजस्तो भएको थिएँ, जसलाई टुनामुना गरेर मन्त्रेको अक्षताले हिर्काएर भेडो बनाइएको थियो । अनि, त्यो राजकुमार एकोहोरिएर टुना गर्नेको पछि लागेर हिँडेको थियो रे,' जगदीशले सुनाए, 'त्यो भेडोजस्तै खुरुखुरु मानेर मैले थरीथरीका उपचार गरेँ र सबैको चित्त बुझाएँ । मेरो चित्त भने समयले नै बुझाउनेछ भन्ने सोच्थेँ ।'
आज उनी मृत्यु कुरिरहेका छन् । टाढा उभिएको मृत्युको छाया नजिकै देखिरहेछन्, त्यो भयप्रद मुद्रा अघिल्तिर आफ्ना केही कथाव्यथा लेखिरहेछन्, सारा मनोभाव घोप्ट्याएर । चेखबको एक पात्रले आफ्नो हृदय अनेक पीडाले भरिएपछि अरू कोही नपाएर आफ्नै घोडासँग आफ्ना दुःख र वेदना कहेजस्तो, उनी अक्षरहरूलाई आफ्ना दुःखका कथा भनिरहेछन् । मलाई पनि आफ्नो मृत्यु चिन्तन सुनाइरहेछन् ।
काल त निष्ठुर हुन्छ । मृत्युचेतनाले हाम्रा सारा सुख समाप्त गरिदिन्छ । सोसिल रोड्सले मर्ने बेला भनेका थिए— 'यति मात्र गरियो, कत्रो बाँकी रह्यो ? सबैको त्यस्तै हो ।' मृत्युको पूर्वाभासले मानिसको भावनामा ठूलो परिवर्तन ल्याइदिन्छ । हामीले यस समाजमा यो कुरा अनुभव गरेकै छौँ । मन दान, धर्म, पुण्य गर्ने, यश-कीर्तिका कामपट्ट िजान्छ । टमस मानले भनेका छन्, 'मृत्युका बारेमा धार्मिक दृष्टिले चिन्तन गर्नु जीवनको अभिन्न पक्ष हो ।' जगदीश घिमिरेले पनि मृत्युको चिन्तन धार्मिक दृष्टिले गरे । गाउँ रामेछापको जग्गादान गरे । 'अब बाँचिँदैन भन्ने लाग्यो । मृत्युको अड्कल गर्दा लेनदेन टुंग्याउनुपर्छ भन्ने लाग्यो । मन्थलीमा भएको जग्गा केही दान गरेँ, त्यतिले मात्र पनि मनमा सन्तोष मिल्यो । शून्य, एकान्त जस्तो भयो,' उनले सुनाए ।
अहिले त जगदीश निकै तंगि्रएका छन् । पहिलेजस्तो दुःखी छैन समय । मर्छु जस्तो लागेको छ ? 'अहिले पो केही तंगि्रएँ, के थाहा कहिले मर्छु ? सबै मृत्युका मुखमा छन् । तर, यति थाहा छ चाँडै मर्नेछु,' जगदीश यति सुनाउँदा निकै भावुक भएका थिए । मृत्युलाई नजिकबाट देखेका जगदीशलाई मृत्युको अभिलाषा पनि छ होला ? 'छैन, त्यो त स्वाभाविक प्रक्रिया हो नि,' उनले भने, 'थला परेर, कुहिएर बस्नुभन्दा मर्नु ठीक हो । लामो समय बाँचौँ भन्ने पनि छैन ।'
जगदीशले अहिले चोभार डाँडाको आफ्नो घरमा बसिरहँदा धेरैपटक माइलोमा हुनुपूर्व र अहिलेको अवस्था दाँजेका छन् । र फेला पारेका छन्, मात्र शून्य, भयप्रद समय । आफ्नै घरका चोटा-कोठाले पनि कहिलेकाहीँ यिनलाई तर्साउँछन् । उनले धेरै कुरा दाँजेका छन् पहिले र अहिलेमा । पहिले जीवनमा रस हुन्थ्यो । रमाइलो हुन्थ्यो । तर, अहिले जीवन फेरिएको उनले देखेका छन् । जीवनका ती रमाइला दिन अहिले आँखाभरि नाच्छन् मात्र । उनले फेला पारेका छन्—मात्र नीरस र चिच्याटलाग्दो समय । जीवनका धेरै इन्द्रधनुषी रङबाट धुलोमा पछारिएका उनी जीवनमा अहिले कुनै रङ देख्दैनन् ।
मृत्युशय्यामा रहँदा कवि लेखनाथ पौड्यालले लेखेका थिए—
यो दुःख भोग्ने परमेश्वरै हो
यो देह उसको रहने घरै हो ।
यो भत्कँदा दुःख अवश्य मान्छ
सुटुक्क सामान लिएर जान्छ ।।
त्यसैगरी मृत्युशय्यामा छट्पटिँदा जगदीश घिमिरेले पनि आफ्नो कथा लेखे— अन्तर्मनको यात्रा । कृतिमा मृत्युबोध, मृत्युचिन्तन, मृत्युप्रतिको समर्पणभाव लेखे । मृत्युको अनुभूति गर्दा अहिले पनि निकै भयप्रद लाग्छ जगदीशलाई । जुन कुरा अवश्यभावी छ, त्यसैप्रतिको भय कति त्रासद । यसरी लेखकले आफ्नैसामुन्ने मृत्यु उभिएको छर्लंगै देख्दाको मनोभाव कस्तो होला, म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ । के मृत्यु प्रकाशमान् हुन्छ ? 'देखिँदैन मृत्युलाई । कहाँ हुनु प्रकाशमान् ?' उनले सुनाए । जे भएको छैन त्यो अतिरेक पि्रय हुन्छ । तर, जगदीशलाई मृत्यु पि्रय लागेन रे ! 'यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । बरु आँखामा आफन्त आए, आफ्नो गाउँ लहरै आए । तर, पि्रय लाग्नेगरी मृत्यु आएन,' उनले भने ।
मृत्यु प्रबल हुँदै आएपछि पनि जगदीशमा लेख्ने कुरा धेरै थिए । सम्भावना पनि धेरै थिए । उनको पूर्वार्द्धको जीवनले त्यही भन्छ । हृदयभित्र कुनै कुनामा तृप्त हुनेगरी साहित्य पढ्ने, लेख्ने धोको छँदै थियो । आफूअगाडि उभिएको अँध्यारो उनले अक्षरहरूमा पोखे । अँध्यारामा बलेको झिल्कोझैँ, राँकोझैँ उनका अक्षरहरू बलेका छन् । कुराकानीमै पनि घिमिरे एक गम्भीर, दार्शनिक तहमा ओर्लिन्छन् । पहिलेका चालभन्दा फरक, आफ्ना पारिवारिक र पि्रयजनभन्दा प्रेमपूर्ण बोली र दृष्टिको आशामा अल्झेका, असहाय हुँदै गएका, 'डिस्टब्र्ड मुड' अर्थात् खल्बलिएको मुद्रा लिएर हतप्रभ स्थितिमा जगत्को अन्तिम रहस्यको चिन्तनमा डुबेजस्ता देखिएका छन् घिमिरे ।
जगदीशलाई मृत्युले कुनै एकदिन दाउ हान्छ जस्तो लाग्छ । 'दाउ हान्छ तर, थाहा हुँदैन । जन्मसँग मृत्यु छ । जीवनसँग गाँसिएको छ मृत्यु,' उनले भने । मृत्यु अँध्यारैमा पनि आउन सक्छ । जगदीशले भनी पनि सके— मृत्यु प्रकाशमान् हुन्न, अन्धकारमय हुन्छ । अन्धकारको आकृति कहाँ छ र ? 'मर्नु पनि अन्धकारजस्तै हो । त्यो आफैँ कुरिन्छ,' उनले भने, 'अँध्याराकै बीच लैजान्छ ।' जीवनको निचोडजस्तो दर्शन सुनाए उनले— 'सन्तुलन चुँडिएपछि, आत्मबल फुस्केपछि के गर्नु र ?'
जीवनको चौतारीमा आँखा बिछ्याएर टाढासम्म हेर्दा मृत्यु कुन स्थानमा पाएका छन् घिमिरेले ? उनले पनि पारिजातले शून्यबोध गरेजस्तै सुनाए—'मान्छे जन्मियो अर्थात् मृत्यु जन्मियो । आफ्नो मृत्यु मान्छेले देख्दैन । समयले निर्धारण गर्छ मृत्यु । सायद मृत्यु आत्महत्या गरेर आफूलाई सिध्याउनेले मर्नुअघि देख्छन् ।' उनलाई लाग्छ— मृत्युले कसैलाई टिपेर लैजान संकोच मान्दैन । 'मृत्यु समय हो । आफैँ बग्दोरहेछ,' उनले भने । जगदीशलाई के लाग्छ, जीवनको अन्तिम विन्दु नै मृत्यु हो वा त्यसभन्दा पछि पनि केही छ ? 'मरेको मान्छे त मरिगो नि ! त्यो मान्छे आफ्नो कृतिमा अमर रहन सक्छ । ऊ अमर हुनुको लाभ बाँच्नेहरूलाई छ । नत्र त अन्तिम विन्दु नै मृत्यु हो ।' बरु मान्छे शिथिल भएपछि, मर्ने चाहना बलियो भएर आउँछ भन्छन् जगदीश । 'त्यस्तो बेला मान्छेले आफैँ काल आओस् र टिपेर लैजाओस् भन्छ,' उनले सुनाए ।
मान्छे जति बूढो हुँदै जान्छ, मृत्युको भय पनि बलियो हुँदै आउँछ, होइन र ? 'मृत्युको भय हुनैपर्छ भन्ने जरुरी छैन । यो त यथार्थको स्वीकृति हो । आफैँले अनुभूति गरेको हो मर्छु भन्ने । मर्नु लेखेको रहेछ, मरिन्छ भन्छ मान्छेले,' उनले भने । त्यसो भए मृत्युको मुखबाट बाँचेर आउँदा कुनचैँ शक्तिशाली रहेछ जस्तो लाग्यो त, समय कि जीवनको त्यान्द्रो ? 'समयले जन्माउँछ । साइत हो समय । समयमा जीवन हुन्छ । समयले मार्छ । त्यो समय काल हुन्छ । जन्म, बालापन, यौवन, प्रौढावस्था, मृत्यु— सबै उही समयका फरक नाम र पर्याय हुन् । सबै समय उही हो, एकै हो,' उनी दार्शनिक चेतनामा भन्दै गए— 'जीवन बाँच्नुको अर्थ मर्नु हो । समय अस्तित्व मात्र होइन, सँगसँगै एकैपटक अस्तित्व र अस्तित्वहीनता समेत हो । समय कुनै राम्रो, कुनै नराम्रो हुँदैन । जन्म सुसमय, मृत्यु कुसमय होइन । उही एउटै समय सृष्टि, स्थिति र प्रलय अर्थात् जन्म, जीवन र मृत्यु हो । यसमध्ये कुनै समय मान्छेका लागि उत्सव हुन्छ, कुनै समय शोक । समय यथार्थ हो । त्यसैले जीवनको त्यान्द्रो नै समय हो ।
त्यही शक्तिशाली छ ।' उनलाई बाँच्नु जीवनको अल्पकालीन समाधान हो अनि मर्नु दीर्घकालीन समाधान जस्तो लाग्छ ।
मल्टिपल माइलोमाले आफूलाई गाँज्दै ल्याउँदा जीवनका अर्थपूर्ण दिनहरू आँखामा नाचिरहे । 'फर्केर हेर्दा जीवनका कुनै पनि दिन अर्थहीन लागेनन् । यो जीवन नै रहस्य रहेछ । सुख-दुःखका दिनहरू एक-एक गरी आँखामा आए । झसंग भएँ, कति टाढा आइपुगिएछ जीवनमा जस्तो लाग्यो । निकैबेर टोलाएर बस्थेँ उपचारका दिनहरूमा,' उनले भने । उनलाई मृत्यु बलवान् हुँदै आउँदाका ती दिनहरू बेथितीसँग गुजारिए, अर्थहीनसँग बिताइए, मूल्यहीनसँग कटाइए भन्ने लाग्दोरहेनछ । 'अर्थहीन भएनन् ती दिनहरू, बरु दुःख र अप्ठ्याराका दिन थिए,' उनले भने । त्यसो त जगदीशलाई दुई पाइला हिँड्न अहिले पनि निकै सास्ती हुन्छ । अहिले पनि कम्मरमाथि फलामकै पेटी बाँधेर बस्नुपर्छ । 'तैपनि, निकै भाग्यमानी रहेछु जस्तो लाग्छ,' उनले सुनाए ।
त्यसबेलाका सबै रात मर्छु भन्ने भयले गुजारिए होलान् । हरेक बिहान झुल्कने जाज्वल्यमान् सूर्यको पछिल्तिर अँध्यारोको अत्यासलाग्दो प्रताडना छैन ? 'राति आकाशमा थोरै प्रकाश लिएर झुल्कने जूनले पनि बाँच्ने शक्ति दिन्थ्यो । अस्पतालको बेडनजिकैको झ्यालबाट बाहिर म शीतल चन्द्रमा हेर्थें,' उनले सुनाए, 'त्यसले बाँच्ने इच्छा अझ प्रबल भएर आउँथ्यो । बरु साह्रै कालो अँध्यारो रातसँग भने निकै डर लाग्थ्यो ।'
उनलाई अझै पनि आफ्ना आँखैअगाडि मृत्यु सल्बलाइरहेभै"m लाग्छ र त्यसले अहिले पनि तर्साउँछ । तैपनि, उनले मृत्युलाई 'जीवन र दुःखको समापन' ठानेका छन् । 'यो आफ्नो अधीनमा रहँदैन,' उनले सुनाए । मृत्युसँग कहिल्यै माया पलाएन । 'जीवनप्रति मात्र माया हुँदोरहेछ,' उनले भने । स्वेच्छिक मृत्युवरण गर्नु संसारलाई अनादर गर्नु, जीवनलाई नै अनादर गर्नु हो ? 'ठीकै हो स्वेच्छिक मृत्यु । कोही जीवन समाप्त गर्ने कुरा सोच्छ भने त्यो जीवनप्रतिको अनादर होइन । बरु आदर गरिएको हो, आफू बाँचेको समयलाई,' उनले भने । उनलाई अभाव, आवेश, क्रोध, रिसले मृत्युसँग प्रेम गर्छन् जस्तो लाग्छ । 'प्रेमले पनि मार्न सक्छ मान्छे । प्रेम र मृत्यु सँगै आउँदारहेछन्,' उनको जीवनभरिको एक महत्त्वपूर्ण सिकाइ यस्तै रहेछ ।
देवकोटा, युद्धप्रसाद, हरिभक्त, पारिजातहरूले अभावै-अभावमा मृत्युवरण गरेका थिए । त्यस्तो मृत्युको अनुभव कस्तो हुँदो हो ? भन्छन्, 'पीडादायक हुन्छ नि ! देवकोटा, हरिभक्त, पारिजात । यिनको त समय नै अभावको थियो । जिन्दगीभरि अभाव भोगे उनीहरूले । उनीहरू र मबीच फरक बस् यत्ति हो, म अभाव र गरिबीमा मर्दिनँ ।'
जीवन धेरै दुखेको छ । इतिहास दुखेको छ । अब त शान्ति पाए हुन्थ्यो । कतै एउटा शून्यमा विलीन हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेन ? 'शून्यमा विलीन हुन पाए हुन्थ्यो जस्तो एकपटक लागेको थियो । बिरामी भएपछिको कुरा हो । म दिल्लीको रेल्वे स्टेसनमा थिएँ । त्यो रेल हुँइकिएर आउँदा त्यही रेलको लिगमा बसौँ र मृत्यु अँगालौँ जस्तो लागेको थियो । तर, आँखाअगाडि के अर्कै कालो वस्तु आएर बसेझैँ लाग्यो, सायद माया पो लाग्यो कि जिन्दगीको ?' उनले भने ।
जगदीशले जिन्दगीको कुनै अर्थ खोजेनन् । बरु बिरामी हुँदा थलिएर बाँच्नुपर्ने बाध्यताविरुद्ध अर्को बाध्यता (साहित्य) टिपेर मुक्त हुन खोजे । बीचमा चटक्कै त्यागिसकेको साहित्य-सिर्जनमा लागे । गाउँघर, आफन्तको माया खोजे र जीवन दुःखेको पीडाले छट्पटाइरहे । अब जगदीशले कसैलाई रिझाउनु छैन, कोही रिसाउला भन्ने पनि छैन । बरु एउटा निचोड फेला पारेका छन् उनले— 'जीवन छ र नै मृत्यु पनि अस्तित्वमा छ ।'
उमेरमा जिन्दगी जति गुलियो भए पनि अहिले जिन्दगी अमिलो र नमीठोपन मात्रै भेटाएका छन् उनले, साँच्चै अमिलो । छुट्नेबेला उनले सुनाए, 'मेरो जीवन काठमाडौंको फोहोरमा बित्यो । त्यसैले अमिलो लाग्यो यो जिन्दगी । म मरेपछि मेरो खरानी मेरा पुर्खाको थलो, मेरा स्वजन माझी, मझिनीहरू र मलगायत सबैको साझा, मन्थलीको तामाकोसी र सुकाजोरको सफा दोभानमा बगाइदेऊ । तर, खरानी छरेर तामाकोसीको सफा पानी नधमिल्याउनू । मेरो खरानी मन्थलीको कुनै पाखामा छरिदिए पनि हुन्छ ।'
Posted by Narthunge at 3:39 AM No comments:
Posted by Narthunge at 2:58 AM No comments:
Posted by Narthunge at 1:21 AM No comments:
Posted by Narthunge at 1:15 AM No comments:
ब्रिटेन युद्धताका एक युवतीको प्रेमकथा
त्यतिवेला म अठार वर्षकी थिएँ । सन् १९४० को गर्मी महिनाको एक दिन म घरमा कुचो लगाइरहेकी थिएँ । झ्यालबाट मैले उसलाई सडकमा हिँडिरहेको देखेँ । ऊ अर्थात् एल्फ अर्थात् मेरो सपनाको राजकुमार । म उसलाई देख्यो कि ट्वाल्ल परेर हेर्थेँ । तर, उसका अगाडि पर्ने र बोल्ने हिम्मत हुँदैनथ्यो । त्यतिवेलाको लन्डनमा युवतीहरू यस्तै हुन्थे । लज्जालु र डराउने ! अहिले त पहिलो भेटको पहिलो मिनेटमै 'आई लभ यू' भन्न बेर मान्दैनन् ठिटाठिटीहरू । अझ कोहीकोही त चुम्बन गर्न पनि पछि पर्दैनन् पहिलो भेटमै ।
त्यस दिन पनि उसलाई आँखाबाट ओझेल नहुन्जेल हेरिरहेँ । उसप्रति यस्तरी माया उम्लेर आउँथ्यो कि हुने भए म उसका कदममा छताछुल्ल पोखिन्थेँ होला । तर, त्यसै दिन मेरो प्रेमको दुनियाँ जलेर खरानी भयो...।
ऊ गएको दस मिनेटजति पछि फेरि बाटोमा देखियो । तर, यसपटक उसको पाखुरामा एन्जी झुलिरहेकी थिई । ऊ मस्की मस्की कुरा गरिरहेकी थिई । हे भगवान् ! यो एन्जी भन्ने डन्किनीले मेरो सपनाको राजकुमारलाई खोसी ! मेरा आँखा यसै यसै भरिएर आए । मलाई भाउन्न हुन थाल्यो । एन्जी र म एउटै स्कुलमा पढ्थ्यौँ । मलाई एन्जी फिटिक्कै मन पर्दैनथ्यो । चकचक गरिरहनुपर्ने, फतर फतर बोलिरहनुपर्ने एन्जी स्कुलमा बद्नाम थिई । तेह्र/चौध वर्षको उमेरदेखि नै ऊ स्कुलका बढी उमेरका केटाहरूसित लठारेर हिँड्थी । कतिपटक मेरो नोटबुक चोरेकी थिई यसले । र, आज मेरो प्रेममा लामो हात गरी यसले । कुकुर्नी !
यसै वर्ष ब्याटल अफ बि्रटेन सुरु भयो । र, हाम्रा दुर्दिन सुरु भए ।
ब्याटल अफ बि्रटेन जर्मन एयर फोर्सले बि्रटेनविरुद्ध गरेको हवाई हमला हो । बि्रटेनको रोयल एयर फोर्सभन्दा जर्मन एयर फोर्स उत्कृष्ट छ भन्ने सावित गर्न जर्मनीले बि्रटेनमाथि हवाई हमला गरेको थियो ।
हवाई हमलाको संकेत दिने साइरन बज्नासाथ हामी हवाई हमला हुँदा लुक्न बनाइएका सार्वजनिक सुरक्षास्थल, पब्लिक एयर रेड सेल्टरतिर कुदिहाल्थ्यौँ । मान्छेहरू सेल्टरतिर भेडाबाख्राझैं बुर्कुसी मारेर कुद्थे । म र मेरी आमा पनि कुद्थ्यौँ । कहिलेकाहीँ त रातरातभरि सेल्टरमा बस्नु पर्थ्यो । अरूवेला भने दुई/तीन घन्टासम्म सेल्टरमा बसिन्थ्यो । एक रात दुई बजेतिर हामी सेल्टरबाट घर फर्किंदै थियौँ । तर, बाटोमा त यौटा विस्फोट नभएको बम तेर्सिएको रहेछ । त्यस रात हामी आमा-छोरी छिमेकीका घरमा बस्यौँ ।
सेल्टरमा हाम्रो बेहाल थियो । मैले बि्रटिस जनतालाई यति दयनीय कहिल्यै देखेकी थिइनँ । सेल्टर दुई तखता भएको दराजजस्तो ठाउँ हुन्थ्यो । माथ्लो तखतामा पुरुष बस्थे भने तल्लो तखतामा महिला । सेल्टरमा चर्पी या नुहाइधुवाइ गर्ने ठाउँ हुँदैनथे । भाँडाकुँडा माझ्ने सानो ठाउँ भने हुन्थ्यो । त्यहाँ नुहाउन सकिँदैनथ्यो किनभने त्यो ठाउँ ह्वांगै थियो । हामी तीन सातासम्म एउटै लुगा लगाउँथ्यौँ ।
एक दिन सेल्टरमा बसेका वेला आमाले 'लुगा नफेरी भएन, असाध्यै मैलो भयो' भन्नुभयो । तर, सेल्टरका व्यवस्थापकले कसैलाई घर जान दिँदैनथे । ऊ चिया खान गएको मौका छोपी हामी गुपचुप तरिकाले आफ्नो घरभित्र पस्यौँ । अँध्यारोमा जब आमाले आफ्नो भित्री लुगा खोलिन्, पूरै कोठा ह्वास्स गनायो । मैले झन्डै वान्ता गरेकी ! आमाले हतार हतार लुगा फेर्नुभयो । हामी घरबाहिर निक्लनै लागेका थियौँ, कि अचानक हामीलाई घरमा केही गडबड भएको छ भन्ने लाग्यो । चोटामा उक्लेर हेरेको त हाम्रो टाउकोमाथि खुल्ला आकाश थियो ! बमबारीमा परेर घरको छानो उडेको थियो । बचेखुचेका बोक्न सक्ने चीजबीज त लानै पर्‍यो भनेर हामी घरभित्र यताउति गर्न थाल्यौँ । घरभित्र घर थिएन, घरको भग्नावशेष मात्र थियो । दराजका घर्रासमेत काँचका टुक्राले भरिएका थिए ।
भोलिपल्ट मेरा दाइ हामी बसेको छिमेकीको घरमा आए । उनी पुलिस थिए । हाम्रो हालत देखेर असाध्यै दुःखी भए उनी । दाइले हामीलाई मेल्टन मोब्रे पठाउने व्यवस्था मिलाए । हवाई हमलाको खतरामा रहेका बस्ती उठाएर मेल्टन मोब्रेमा सारिन्थ्यो । त्यहाँ मेरी भाउजू र भतिजी पनि थिए । यसरी हामी लन्डनबाट मेल्टन मोब्रे पुग्यौँ । भाउजू हामी आएकाले गद्गद् थिइन् ।
मैले ग्रान्थममा रहेको एक हतियार कारखानामा काम पाएँ । हिस्पानो भनिने बन्दुक बनाउनु मेरो काम थियो । पहिलो दिन कारखानामा मलाई ठुल्ठूला मेसिन चलाउनेबारेमा एक घन्टाजति प्रशिक्षण दिइयो । बेलुका काम सकिएपछि आफ्नो कार्डमा हाजिरी चिह्न लगाई माग्नु पर्थ्यो। यसका लागि मैले हाजिरी चिह्न लगाउने कर्मचारीको कोठाको झ्यालमा टकटक गरेँ । झ्याल खोलियो र झ्याल खोल्ने मान्छे थियो- उही मेरो सपनाको राजकुमार ! मेरो मुटु भट्याक-भट्याक हल्लिरहेको थियो । म थर्थरी कामिरहेकी थिएँ । उसलाई यसरी यहाँ भेटुँला भनेर मैले कल्पनासम्म गरेकी थिइनँ । म असाध्यै खुसी भएकी थिएँ । तर, मैले झल्याँस सम्झेँ कि ऊ त एन्जीको पे्रमी पो हो त ! उसले मेरो कार्डमा हाजिरी चिह्न लगाउँदै गर्दा मैले सोधेछु, 'तिम्री प्रेमिका एन्जीको हालखबर के छ नि ?' प्रश्न गर्न नपाउँदै उसले रिसाएको जस्तो गरेर भन्यो, 'के को प्रेमिका नि ? त्यो धोकेवाजलाई मैले उहिल्यै छोड्दिसकेँ । उसले एकैपटक दुईजनासित प्रेम गरेकी रहिछ ।' अब उसलाई मैले प्राप्त गर्ने सम्भावना बलियो भएर देखापर्‍यो ।
तर, त्यस कारखानामा सयजना जति महिला कामदार थिए । उनीहरू सबै ऊ भनेपछि मरिहत्ते गर्थे । लन्डनमा एक एन्जी थिई भने यहाँ एक सय एन्जी थिए ।
तर, हरेकपटक मेरो कार्डमा चिनो लगाउँदा उसको अनुहार रातो हुन्थ्यो । केही बोल्न, केही बताउन या केही व्यक्त गर्न खोजेझैं देखिन्थे उसका आँखा ।
हामी बिहानदेखि साँझ नपरुन्जेल काम गर्थ्यो । एक साँझ हाजिरी चिनो लगाउन गएका वेला उसले 'भोलि हामी सिनेमा हेर्न जाऔँ न' भन्यो । मैले नाइँ भन्ने कुरै थिएन ।
सिनेमाको नाम थियो- वान हन्ड्रेड मेन एन्ड अ गर्ल । डिएना डर्बिनको पहिलो फिल्म थियो त्यो । उनी गजबकी अभिनेत्री थिइन् । सुन्दर र सान्दार । हामीले सिनेमाको भरपुर आनन्द लियौँ । त्यस दिन मैले धोको फुकाएर कुरा गरेँ । उसले पनि आफ्नो बारेमा धेरै थोक बतायो । उसले आफू कारखानाका कुनै पनि महिला त के, संसारका कुनै पनि महिलासँग प्रेम गर्न नसक्ने बतायो । उसले भन्यो, 'म तिमीलाई चाहन्छु ।'
यसरी सुरु भयो युद्धकालमा हाम्रो पिरती ।
त्यसको केही महिनापछि हामीले बिहे गर्ने निधो गर्‍यौँ । एल्फले लाइसेस्टरमा मलाई स्वयंवरेऔंठी लगाइदियो । म उन्नाईस लागेकी थिएँ । बिहे त गर्ने नै भन्यौँ हामीले, तर बिहेको विधि पुर्‍याउन चाहिने सरसामग्रीको एकदम अभाव थियो । कतैबाट अलिकति रेसमी कपडा ल्याइयो र अड्कोपड्को तेलको धुप गरेर बेहलीको पहिरन तयार गरियो । मेरो दाजुसित क्यामेरा थियो । फोटो खिच्ने जिम्मा उनले लिए । आमा र मैले चिनी र अन्डाको जोहो गर्न सुरु गरेका थियाँै विवाहको केकका लागि । विवाहको दिन मैले त बिदा पाएँ, तर एल्फले भने आधा दिनको मात्रै बिदा पाए । हाम्रो विवाह भव्य रूपले सम्पन्न भयो । यस अर्थमा भव्य होइन कि हामीले बढी तामझाम गरेका थियौँ । यस अर्थमा भव्य कि युद्धकालमा पिरती सफल भएको थियो ।
Posted by Narthunge at 6:11 AM No comments:
मेरो अनुरोध कसैले सुनेन
एउटा मान्छेले जीवनमा सामान्यतया एउटै राष्ट्रिय गान गाउँछ । ऐतिहासिक परिवर्तनको घुम्तीवरिपरि बाँच्ने ज्यानले दुईटा गाउने अवसर पाउन सक्छ, अहिलेको नेपाली पुस्ताले जस्तै । तर, अम्बर गुरुङले भने एउटै जीवनमा चार-चारवटा राष्ट्रिय गान गाए । दार्जिलिङमा जन्मे-हुर्केका अम्बरले भारतमा बि्रटिस उपनिवेश रहँदा थोमस अर्गस्टिन आर्नेले कम्पोज गरेको बेलायती गान 'गड सेभ आवर ग्रासियस क्विन...' गाए, भारत स्वतन्त्र भएपछि रवीन्द्रनाथ टैगोरको 'जन गण मन...' गाए । दार्जिलिङको सरकारी जागिर छाडेर नेपाल फर्केपछि बखतवीर बुढापिर्थीले तयार पारेको धुनमा चक्रपाणि चालिसेका शब्द 'श्रीमान् गम्भीर नेपाली...' मा उनले स्वर मिलाउन थाले ।
अम्बर गुरुङलाई लागेको थियो, राष्ट्रिय गानका रूपमा यही 'श्रीमान् गम्भीर नेपाली' गाउँदा-गाउँदै एकबारको जुनी जानेछ । तर, जीवनमा कहिल्यै नसोचेको सन्जोग आयो उनीसामु । त्यो हो, आफूले गाउने राष्ट्रिय गानको धुन आफैँ सिर्जना गर्ने । हुन त, अम्बरलाई नेपालमा निम्ता गरेर ल्याएको राजा महेन्द्रले हो । (नेपाल आगमनपछि नेपाली गीत-संगीतमा उनको विशिष्ट योगदान पनि पुग्यो) तर, गुरुङलाई नयाँ राष्ट्रिय गानको धुन सिर्जना गर्न राजाले नै त के दिन्थे र ? जनयुद्ध र जनआन्दोलनको आँधीले राजतन्त्र गल्र्यामगुर्लुम पारेपछि मात्रै अम्बरले त्यो महान् अवसर पाए । नीति-नियममा हेरफेर भयो, शासन-प्रशासन बदलियो । त्यही क्रममा सरकारले राजाको स्तुतिको सट्टा नयाँ राष्ट्रिय गान चयन गर्‍यो । छानिएको व्याकुल माइलाको गीत 'सयौँ थुँगा फूलका हामी...' का लागि अम्बरले नै धुन सिर्जना गरे । अहिले औपचारिक कार्यक्रममा उनी आफैँले तयार पारेको त्यही राष्ट्रिय धुन गुनगुनाउँछन् । 'आफैँले राष्ट्रिय धुन बनाउनुपर्ला भनेर मैले सोचेकै थिइनँ,' अम्बरले भने, 'देशमा यस्तो परिवर्तन होला भनेर नेताहरूले त कल्पना गरेका थिएनन्, मैले कसरी कल्पना गर्नु ?
राष्ट्रिय धुनको आयु
कल्पना नगरे पनि अम्बर गुरुङ राष्ट्रिय धुनका सर्जक भएका छन् । उनले राष्ट्रिय धुन सिर्जना गर्नुअघि नेपालकै अघिल्ला धुन र अरू मुलुकका राष्ट्रिय धुनबारे पनि अध्ययन गरे । राजदूतावासका कार्यक्रमहरूमा, विदेश गएको मौकामा र आफ्नै खोजीमा उनले अरू देशका राष्ट्रिय गान सुनेका थिए । नेपालकै पुरानो धुनको पनि उनले अध्ययन गरे । राणाकालमा नेपालमा अंग्रेजहरूकै राष्ट्रिय धुन बजाइन्थ्यो । अंग्रेजहरूको सम्मानमा उनीहरूकै धुन बजाउने चलन थियो । 'धुन त आफ्नै हुनुपर्छ,' त्यतिबेला अंग्रेजहरूले नै टिप्पणी गरे । अनि, मात्रै तत्कालीन शाही सेनाका ब्यान्डमास्टर बखतवीर बुढापिर्थीको धुन तयार भयो, जसमा पछि चक्रपाणि चालिसेले शब्द लेखे । 'कसैले बुढापिर्थीले तयार पारेको भन्छन्, कसैले यन पाठानले हो भन्छन्,' गुरुङले भने, 'तर, अंग्रेजको धुनको सट्टा नेपाली धुन नै हुनुपर्छ भनेर त्यो तयार पारिएको थियो ।' राष्ट्रिय गान वा धुन परिस्थितिले बदल्छ भन्ने लाग्छ गुरुङलाई । उनलाई थाहा छ, एउटा परिस्थितिले 'श्रीमान् गम्भीर..' जन्म्यो । अर्को परिस्थितिले त्यसैलाई हटाइदियो । देशको राजनीतिक परिवर्तनले राष्ट्रिय गानमा परिवर्तन गरिदियो । नबदलिने राष्ट्रिय गान बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन ? संगीतकारसँग त्यस्तो आइडिया पनि त हुन सक्छ ! 'नबदलिने राष्ट्रिय गान भन्ने हुँदैन,' गुरुङले ढुक्कैसित भने, 'अहिलेको राष्ट्रिय धुन पनि फेरिन सक्छ ।' आफैँले तयार पारेको धुनप्रति पनि उनको अविश्वास रहेछ ।
त्यसो भए, अहिलेको राष्ट्रिय गान कहिले र कस्तो अवस्थामा फेरिन्छ त ? 'देशको परिस्थिति फेरियो भने यो फेरिन्छ । अहिलेको जस्तो राजनीतिक व्यवस्था रहेन भने यो गान पनि रहन्न,' उनले भने, 'देशमा कम्युनिस्ट व्यवस्था आयो भने कम्युनिस्ट गान नै बनाउँछन्, यो गान र धुन फेरिन्छ ।'
राष्ट्रिय धुनका विशेषता
पञ्चायतकालमा देशभक्तिका भाव भएका गीतलाई रेडियोमा राष्ट्रिय गीत भनेर बजाइन्थ्यो । त्यो अम्बर गुरुङलाई चित्त बुझेको थिएन । उनले तत्कालीन प्रशासकसँग अनुरोध पनि गरे, 'यी गीतलाई राष्ट्रिय गीत होइन, देशभक्तिपूर्ण गीत भन्नुपर्छ । के यी गीतबाहेक अरू सबै अराष्ट्रिय गीत हुन् त ?' तर उनको आग्रहलाई कसैले टेरपुच्छर लगाएन । धेरै पछि मात्रै त्यस्ता गीतलाई देशभक्ति गीत वा स्वदेश-गान भन्न थालियो । त्यतिबेलादेखि नै उनलाई राष्ट्रिय गानप्रति चासो बढेको थियो । अहिले उनीसित राष्ट्रिय गानको विशेषताबारे लामो अध्ययन र आफ्नै अनुभव छ । 'राष्ट्रिय गान त छोटो पनि हुनुपर्‍यो, सरल पनि हुनुपर्‍यो, सबैले सजिलै गाउन सक्ने पनि हुनुपर्‍यो,' अम्बरले भने, 'हाई स्केल हुन पनि भएन, लो स्केल हुन पनि भएन । बूढाबूढीदेखि केटाकेटीसम्मले गाउन सक्ने हुनुपर्छ । हाम्रो संस्कृति पनि झल्कनुपर्‍यो ।' अम्बरले भन्दै गए, 'राष्ट्रिय गानमा विचार र भावनाको संयोजन हुनुपर्छ, हाम्रो गौरवगाथा हुनुपर्छ, आफैँ मनन गर्न मिल्ने खालको हुनुपर्छ ।' र, उनले फेरि त्यही दोहोर्‍याए, 'मुख्य कुरो सबैले सजिलै गाउन सक्ने खालको हुनुपर्छ ।'
अम्बरले आफैँले धुन सिर्जना गर्दा के-के कुरामा ख्याल पुर्‍याए त ? 'मलाई धुन बनाउन सरकारले जम्मा ४५ दिन दिएको थियो । मैले यो धुन हर्ष, पर्व, शोक, संकट सबै राष्ट्रिय घटना वा अवसरमा बजाउन मिल्ने हुनुपर्छ भन्नेतिर ख्याल पुर्‍याएँ । यो अहिलेको धुन राष्ट्रिय शोकमा बिस्तारै बजाउन मिल्छ ।' अधिकांश देशका राष्ट्रिय धुनहरू सेना वा प्रहरीले ब्यान्डमा बजाउने खालका छन् । अम्बरले भने नेपालकै अघिल्लो राष्ट्रिय धुनभन्दा फरक खालको सिर्जना गरेका छन् । भने, 'हलुका शास्त्रीयपन र वीररसको रागमा आधारित छ यो अहिलेको धुन ।'
धुन सिर्जना प्रक्रिया
आन्दोलन सफल भएपछिको सरकारले पुरानो राष्ट्रिय गान खारेज गरेपछि नयाँ राष्ट्रिय गान बन्ने भयो । सरकारका अधिकारीले कवि/लेखकलाई 'ल, तपाईंहरू मिलेर दिनुस्' भने । त्यसरी कुरा मिलेन । अनि, सरकारले कविहरूलाई आ-आफ्ना गीत बुझाउन आवेदन डाक्यो । प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने कुरा आएपछि धेरैले सहभागिता जनाएनन् । 'त्यसो गर्दा आफ्नो गीत छनोटमा परेन भने वरिष्ठ कवि-लेखकलाई आत्मग्लानि र अपमानबोध हुन्थ्यो,' राष्ट्रिय गान छनोट समितिका सदस्यसमेत रहेका अम्बरले भने, 'त्यही भएर धेरै राम्रा-राम्रा गीतकार/कविले नै गीत बुझाएनन् ।'
पछि १२ सयभन्दा बेसी गीत आए र त्यसपछि अम्बर गुरुङसहितको समितिले व्याकुल माइलाको 'सयौँ थुँगा फूलका हामी' छान्यो । 'मलाई त्यो गीत कसको भन्ने थाहा थिएन,' अम्बरले भने, 'तर, गीत विवादमा आयो ।' कतिले त गीत स्तरीय र सुललित नै छैन पनि भनेका थिए । अम्बरलाई पनि त्यस्तै लागेको थियो कि ? 'मैले त खै के भन्ने ? त्यो त हामी आफैँले छनोट गरेको थियौँ । छनोट भनेको त्यहाँ जस्ता गीत आए, तिनैबीच छान्ने न हो,' उनले प्रतिप्रश्न गरे, 'मैले त जस्तो गीत दिए पनि धुन बनाउनुपथ्र्यो । त्यो अब व्याकुलको भाग्यमा लेखेको रहेछ भन्नुस् न ।' अम्बरले अहिलेको गीतको भाव, गीति-संरचना र मर्मको कुनै प्रशंसा गरेनन् । उनी छनोट समितिमा रहँदा 'अम्बरले आफ्नै संगीतको 'रातो र चन्द्र सूर्य' गीत राष्ट्रिय गानमा राख्छ भन्दै बाहिर खुबै कुरा काटिए । 'मैले किन आफ्नै गीत राख्थेँ र ? मैले त प्रस्टै भनेको थिएँ, त्यस गीतको संगीतले हुँदैन, शब्दचाहिँ हुनसक्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो जति राम्रो राष्ट्रिय भावनाको गीत त मैले अर्को देखेकै छैन ।'
छानिएको गीतमाथि धुन बनाउने जिम्मा पहिले नेपाली सेना र प्रहरीलाई दिइयो । यो अम्बरलाई थाहा थिएन । पछि सरकारी अधिकारीले नै अम्बरलाई पनि धुन बनाउनू भने । संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीले पनि अम्बरलाई धुन तपाईंले नै बनाउनुपर्छ भनेर अनुरोध गरे । 'मैले बनाएको धुन सबैले मान्ने हो भने बनाउँछु, नत्र विवाद गर्ने वा पछि नराख्ने हो भने बनाउँदिनँ भनेँ,' उनले भने, 'तर, मलाई अम्बरले अहम् देखायो भनेर आलोचना र विरोध पनि गरियो । राष्ट्रिय गानको धुन सिर्जना गर्न पाउनु मेरा लागि पनि ऐतिहासिक र महान् अवसर थियो ।' त्यसपछि फेरि तत्कालीन संस्कृतिमन्त्रीले तपाईंले नै बनाइदिनुपर्छ भनेर अनुरोध गरे । अम्बरले आफूले धुन बनाउने हो भने त्यसको क्राइटेरिया के हो ? सुविधा/पारिश्रमिक के कसो हुने हो भनेर सरकारलाई सोधे । 'सरकारले मलाई एस्टिमेट बुझाउनू भन्यो । त्यसपछि मात्रै मैले राष्ट्रिय धुन बनाउने काम सुरु गरेँ ।'
त्यतिबेला सरकारले अम्बर गुरुङलाई तीनवटा भिन्दा-भिन्दै धुन बनाउन भन्यो । उनलाई गीत तीनवटै धुनमा राखिनेछ भनियो । 'उनीहरूले तीनवटा धुन तयार पार्दा लाग्ने प्राविधिक खर्च, वाद्यवादकको पारिश्रमिक, गायकगायिकाको पारिश्रमिक र तपाईंको पारिश्रमिक सबै दिन्छौँ भनेका थिए,' अम्बरले भने, 'त्यसपछि मैले तीनवटै धुन बनाएँ । तीनवटा धुन छनोट गर्नुअघि मैले १२ वटा धुनको तयारी गरेको थिएँ, म त्यसबेला बिरामी पनि परेँ । अन्तिमका तीन धुन मैले मेरा साथीहरू, साहित्यकार, बुद्धिजीवीलाई बोलाएर सुनाएँ । सरकारका प्रतिनिधिले पनि सुने । र, अब हामीले छनोट गर्छौं भनेर लिएर गए ।' धुन लगिसकेपछि अम्बरले कुनै पारिश्रमिकको माग गरेनन् । सरकारले आफैँ निर्णय गरेर व्याकुल माइला र अम्बरलाई पाँच-पाँच लाख रुपैयाँ पुरस्कार दियो । र, त्यही धुन अहिले नेपाली जनमनमा लछप्पै भिजेको छ, जुन धुनले चीनको ओलम्पिकमा पनि विश्वभरिमै नवौँ स्थान हासिल गरेको थियो ।
आफूले छानेका तीनवटा धुन सरकारलाई बुझाएपछि अम्बर गुरुङलाई लागेको थियो, अब सरकारले विशेषज्ञद्वारा अध्ययन गराएर धुन छनोट गर्नेछ । तर, त्यसो भएन । मन्त्रीहरूले आफैँ सुनेछन् र यही ठीक भनेर निर्णय गरिदिएछन् । 'उनीहरूलाई संगीतको शास्त्रबारे के थाहा ?' अम्बरले दुःख मान्दै भने, 'मन्त्रीहरूमा संगीतविज्ञ कोही थिएनन् । गिरिजाप्रसादले यही धुन ठीक छ भन्नुभएछ, अनि त्यही छानेछन् ।' अम्बरलाई चाहिँ कुन राम्रो लागेको थियो ? अहिलेको धुनभन्दा अरू अझ राम्रा पो थिए कि ! 'म त आफ्नै सिर्जनालाई यो राम्रो र त्यो खराब कसरी भनौँ ? तर, अरू बाँकी धुन पनि मलाई धेरै राम्रा लागेका थिए । मैले त्यत्रो मिहिनेत गरेर तयार पारेको थिएँ । तर, हचुवामा अध्ययनै नगरी छनोट गर्ने तरिका मलाई मन परेन,' उनले भने ।
गीत र धुन तयार भइसकेपछि अम्बर गुरुङको अर्को चाहना पनि थियो- राष्ट्रिय गानको पहिलो प्रस्तुति भव्य रूपमा गर्ने । बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनकेन्द्रको ठूलो हलमा विद्यार्थी, प्राध्यापक, नेता, मन्त्री, कर्मचारी, प्रहरी, सेना सबैलाई एकैचोटि गाउन लगाउने र सारंगी, पियानो, बाँसुरी, भ्वायलिन, गितार आदि सबै बाजामा एकैचोटि बजाएर उद्घाटन गर्नुपर्छ भनेर उनले अनुरोध पनि गरेका थिए । 'तर, मेरो अनुरोध कसैले सुनेन,' गुरुङले गुनासो गरे, 'अब भइहाल्यो भने, कसैले पनि मेरो कुरा टेरेनन् ।'
अम्बर गुरुङ राष्ट्रिय धुनका सर्जक मात्रै होइनन्, नेपाली सुगम संगीतको इतिहासमा उनको झन्डै आधा शताब्दी लामो योगदानको बेग्लै उचाइ छ । दार्जिलिङबाट 'नौलाख तारा' गाउँदै सुरु गरेको सांगीतिक यात्रामा उनले सयौँ गीतमा संगीत दिइसकेका छन् । दर्जनौँ गीत आफैँ लेखेका छन् र दर्जनौँमा आपै
"m स्वर भरेका छन् । देशले अम्बरको योगदान पाएको छ । अम्बरले चाहिँ यो देशबाट के पाए ? 'म त यो देशको ऋणी छु,' उनले देशसँग गुनासो गरेनन् । सरकारबाट केही अपेक्षा बाँकी पो छ कि ! उनले भने, 'नेपाल र नेपालबाहिरका सारा नेपालीहरूको यो अपार माया पाएर म औधि खुसी छु । जनताकै तहबाट खुसी छु, राज्यको के कुरा !'
जनस्तरबाट पाएको प्यारले पुलकित भएका अम्बर अहिले पनि संगीत सिर्जनामा व्यस्त छन् । आफ्नो समयका स्रस्टा शंकर लामिछाने, भूपि शेरचन, हरिभक्त कटुवाल भएको भए राष्ट्रिय गान पनि कति गम्भीर र भावपूर्ण लेखिँदो हो भनेर उनी कल्पना गर्छन् । तर, उनीसित आफ्नो जमाना पनि छैन, नयाँ राष्ट्रिय धुन सुन्नलाई समकालीन साथीहरू पनि छैनन् । युग नयाँ छ, रीतिथिति नयाँ छ र रेडियो-टेलिभिजनमा प्रत्येक दिन बज्ने आफैँले सिर्जेको राष्ट्रिय धुन पनि नयाँ छ ।
Posted by Narthunge at 3:40 AM No comments:
भक्तबहादुर भर्सेस सरूभक्त सङ्गीतस्रोता म जुनबेलादे...